‘दबंग ३’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो) – Khabar Silo
एजेन्सी। बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको फिल्म दबंग ३ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा सलमान खानले आफ्नो भूमिका चुलबुल पाण्डेको बारेमा बताएका छन् ।
फिल्मको ट्रेलर भने २३ अक्टूबर देखि २५ अक्टूबर भित्र आउने बताइएको छ । इदमा रिलिज हुने फिल्मको प्रभु देवाले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्म २० डिसेम्बरमा सिनेमाघरमा रिलिज हुदैँछ ।
फिल्ममा सलमान खानको साथमा सोनाक्षी सिन्हा, महेश मांजरेकरको छोरी सई पनि देखिदैछिन् ।
एजेन्सी । दक्षिण भारतीय फिल्म अर्थात साउथ फिल्मको पनि थुप्रै फ्यानहरु रहेका छन् । बलिउडमा सुपरहिट फिल्महरुको गन्ती गर्दा त्यसमा साउथ रिमेक फिल्महरुको दबदबा रहेको छ । साउथ फिल्मको रिमेक राइट्स किन्न बलिउडका निर्माताहरुको होडबाजी नै चल्दछ । साउथ फिल्ममध्येको एक क्षेत्र हो ‘कन्नडा सिनेमा’ । कन्नडा सिनेमाका सुपरस्टार हुन् नवीन कुमार गोअदा अर्थात यश […]
आफ्नो सन्तान गुमाएर मन भत्भती पोल्दा पनि बाहिर मुस्काउँछन् यी कलाकार
एजेन्सी : हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि बलिउड स्टारहरू धेरै विलासी हुन्छन् र खुशी जीवन बिताउँछन्। हामीले देख्दा विलासी र खुशी देखिएपनि उनीहरुको पनि निजी जीवन हुन्छ। उनीहरु पनि सुख मात्र नभई दुखबाट पनि गुज्रिरहेका हुन्छन्। बलिउडमा केही यस्ता कलाकार समेत छन् जसले आफ्ना सन्तानको नि-धन देखिसकेका छन्। त्यस्तै केही कलाकार बारे केहि चर्चा निम्न छ। […]
मंसिर २२ गते रमेश प्रसाईं र नन्दा सिंहबीच विवाह हुँदै
काठमाडौं । पब्लिक स्पिकर रमेश प्रसाईं नन्दा सिंहबीच यही मंसिर २२ गते विवाह हुने भएको छ । पब्लिक स्पिकर, गायकलगायत विभिन्न विधामा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै आएका रमेश र अनाथालय सञ्चालन गर्दै आएकी नन्दाबीच विवाह हुन लागेको हो । ‘अर्न्तदृष्टि नेपाल’ नामक अनाथालय सञ्चालन गर्दै आएकी नन्दा र रमेशले आफूहरुको लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा […]
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन हेर्नुहोस ०७६ कार्तिक ०७ गते बिहिबार ई. स. २०१९ अक्टोबर २४ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य